Ethiopia’s Somali regional politics: new leader, Abdi Illey charged, Liyu police – Kichuu
HomeNewsAfricaEthiopia’s Somali regional politics: new leader, Abdi Illey charged, Liyu police
(africanews)——Ethiopia’s eastern Somali regional state has been a political hotbed in the past weeks with major developments unfolding in the wake of an army backed ouster of its long serving president Abdi Mohamoud Omar, popularly referred to as Abdi Illey.
“Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa: araddaa Sarkamaatti hidhattonnii naannoo addaa Soomaalee Liyyuu Poolisiiin weerara bantee – https://t.co/vmLplQ8CMp pic.twitter.com/OsvrDTEOK6
Weeraraa fi haleellaa guyyaa har’aa Oromiyaa bahaa #Qumbiittidhaqqabeen ummanni nagayaa hedduun miidhamuun beekame.
Weerarri kun meeshaa gurguddaa fi Humna guddaan kan deeggaramee dha.
Haleellan guyyoota sadan darban keessa. kaleessaa fi Dheengadda #Baabbilee fi #Mayyuutti raawwatameeenis ummati hedduu miidhamuun gabaasameera.
Lolli Shiftoota #Soomaaleen Ummata keenya #Harargee irratti baname kun guyyoo bifa addaddaatiin babal’ ataa jira.
Ummata Oromoo Oromiyaa bahaa #QUMBII amma illee shifttota naannoo SOmaaleetiin dhawamaa jira.
Ummanni keenya Naannoo sanitti argamtan karaa dnada’ameen waliif akka tumsitan dhaamamee jira.
Hatii lama hin jirtu Hadhii tokkichuma Walle hara Oromoo 2018-Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa
ABO fi KFOn nus isaaniin boonnee isaan taanee argamna!! INJIFANNOON UUMMATA OROMOOF!